Natiijooyinka doorashadii ugu horreeysay ee Israel ayaa soo jeedinaysa wax guuleysatay - New York Times - TELES RELAY
ACCUEIL » kale » Les premiers résultats des élections israéliennes ne suggèrent aucun vainqueur – New York Times
Yeruusaalem - Benjamin Netanyahu, Ra'iisul Wasaaraha Conservative reer binu Israa'iil oo muddo toban sano ah, oo uu soo horjeeda ugu weyn, Benny Gantz, a ah hoggaamiye milatari hore dhexaadka, u muuqday in doorashada baarlamaanka Talaadadii la soo dhaafay, sida laga soo xigtay warbixin hore ururiyey oo loo tiriyey codbixiyayaasha kuwaas oo baxayay. doorashooyinka.
Marka laga ra'iisul wasaaraha mustaqbalka, doorashada u muuqatay in cabsi dhab ah Netanyahu, 69 sano, ciyaaryahanka xukuma dunida in uu dhisay xoog leh, u xaqiijiyay ammaanka dalka oo uu u dhiibay taxane ah oo guul diblomaasiyadeed dheer doondoonay , badanaa mahadnaqa Madaxweynaha Trump.
Sidoo kale, ma ahan ciddii guuleysatay, qaabka ugu wanaagsan ee Gantz uu ahaa guulo la taaban karo oo loogu talagalay xisbi iyo xisbi cusub. Mr. Gantz, oo ahaa askari diyaargarawe ah oo ka howlgalay Madaxa Shaqaalaha ee 2015, siyaasadda soo galay sannadkii hore isaga oo ku biiraya ciidamada laba hoggaamiye oo kale oo horay u ahaa hoggaamiyayaashii hore si ay u wiiqaan Netanyahu sheegashadiisa in uu ka ilaalin karo Israel.
In ka badan hal milyan oo Israel ah ayaa u muuqda inay u codeeyeen Mr Gantz ee xisbiyada buluuga ah iyo caddaanka ah, isaga oo ku sii jeeday booska bedelka xuquuqda Israaiil, meel ay horay u ahaan jireen Xisbiga Shaqaalaha.
Natiijooyinka ayaa laga yaabaa inay qaabeeyaan qaabka codaynta ee tirinta saacadaha hore. Hase yeeshee dad badan oo reer Israel ah ayaa habeenkii Talaadada u aaday si ay u seexdaan, kadib markii ay codeynayeen.
Haddii codku si adag u sii socdo, su'aasha ah cidda hogaamin doonta Israel lama ogaan doono illaa iyo inta codadka askarta, maxaabiista iyo bukaanka isbitaalka lagu tiriyo. toddobaadkan.
Codbixinta ka soo baxday saddexda qaybood ee telefishanka ee ugu weyni waxay ahaayeen kuwo ku filan si labada dhinacba ay u guuleystaan ​​guusha.
Isagoo wajahaya waji-waji-fool-fool ah, Mr. Netanyahu's Likud wuxuu lahaa hogaamiye yar oo buluug ah iyo Mr. Gantz. Xisbi cad, sida laga soo xigtay laba shabakadood oo Israeli ah. Laakiin xisaabinta qaybaha waawayn ee taageeraya xisbiyada, ayaa horay loogu sii qaaday Likud. Hase yeeshee, subaxnimadii subaxnimadii, qiyaastii rubuc ka mid ah codadka ayaa la tiriyay.
"Tani waa habeenkii guul weyn," ayuu Netanyahu sheegay kadib markii uu isku dayay 2 subaxnimadii, dabaaldega ololaha loogu dabaaldagay calaamada "Bibi, King of Israel". "
"Waxaan aaminsanahay in Sayidka iyo taariikhda ay dadka reer binu Israa'iil siinayaan fursad kale, fursad dahabi ah oo waddankeena u noqonaysa waddan xoog leh, mid ka mid ah quruumaha ugu xooggan adduunka," ayuu yiri. . Waxa uu sheegay in uu qorsheynayo in uu samaysto isbahaysi cusub oo leh xisbiyo xaqiiqo raadin ah oo uu ugu yeeray "wada-hawlgalayaasha dabiiciga ah", laakiin waxa uu rabay inuu noqdo "ra'iisul wasaaraha dhammaan muwaadiniinta reer binu Israa'iil."
Horaantii, Mr. Gantz wuxuu ku biiray xisbiyo badan oo habeenkii ah ee Tel Aviv, isagoo ku dhawaaqay: "Iftiin weyn baa ku ifaya Israa'iil."
"Waannu ku guuleysannay!", Ayuu yidhi, isaga oo u mahad celiyay Mr. Netanyahu sannadkii adeegyadiisa. Wuxuu ballan-qaaday in uu yahay "qof waliba ra'iisal wasaaraha, ma ahan kuwa kaliya ee noo codeeyay" waxaanu ku dooday, markii ay horay uga soo baxeen codbixinta isaga, in xisbigii ugu weynaa uu noqdo kii waxay heleen waajibaad si ay u sameeyaan dawladda soo socota.
Go'aankani wuxuu imanayaa madaxweynaha Reuven Rivlin, maalmaha soo socda waa in uu doorto hoggaamiyaha xisbiga, isaga oo fikradihiisa haysta, fursadda ugu wanaagsan ee helitaanka aqlabiyadda baarlamaanka.
Mr. Netanyahu wuxuu si joogta ah u socdaa midigta, bidixda u gudbey bartamaha, ka dib sanado badan oo rabshado ah sanadihii hore ee 2000 iyo la'aanta geedi socod nabadeed oo tan iyo waagaas ah.
Wuxuu ka faa'iideystay taageerada xooggan ee madaxweynaha Trump, oo laga soo qaaday labadii sano ee la soo dhaafay. Heshiiska nukliyeerka Iran, ayaa lagu aqoonsaday Yeruusaalem oo ah caasimadda Israa'il oo aqoonsaday madaxbanaanida Israel ee Golan Heights laba asbuuc ka hor.
Maamulka Trump mar kale ayaa miisaamaya miisaankii, isagoo ku dhawaaqay jiritaanka Guutooyinka Kacaanka ee Iran inay noqdaan urur caan ah. Habeenimadii Isniinta ee Israel, Netanyahu wuxuu ku faanay Twitter on Ciraaq - laakiin ma aha Ingiriisi - in ay ka jawaabtay "codsi kale oo muhiim ah aniga".
Laakiin Mr. Netanyahu wuxuu raadinayay mudo afraad ah oo isku xiga waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo laaluush kale . Caddaymaha xaaladaha kuwan, kuwaas oo qarsoonna ka dib markii doorashada si looga hortago darroor waxyeeli kara dagaalka ka dhanka ah Netanyahu, waa in hadda la siiyo qareenada, taas oo macnaheedu yahay in Netanyahu in ay majaxaabin karto by macluumaadka waxyeello. maadaama uu isku dayayo inuu sameeyo isbahaysi.
Xitaa haddii uu ku guulaysto sameynta dowlad, waxaa laga yaabaa in ay ku adkaato inuu sii joogo xafiiska marka dambiyada dambiga lagu soo oogay si rasmi ah isaga looga soo horjeedo, oo laga yaabo inay dhacdo dhamaadka xagaaga.
Mr. Netanyahu ayaa sannadkii hore hoos u dhigtay saraakiisha fulinta sharciga iyo ilaalada dimoqraadiyada reer Falastiiniyiinta, iyagoo ka horjeeda booliska, Xeer Ilaaliyaha Guud iyo waxa uu ugu yeeray saxaafadeed "saxda ah", oo isku dayaya in ay soo koobaan waxyaalihii ka soo horjeeda iyo ururada ka shaqeeya xuquuqda Falastiiniyiinta. Xukuumaddiisa ayaa sidoo kale isku dayday inay xakameyso awoodaha Maxkamadda Sare.
Inkastoo Mr. Netanyahu uu xiriir adag la yeeshay wadamada diblomaasiyadeed iyo ganacsiga wadamada cusub, wuxuu hor istaagay rajo kasta oo lagu xallin karo iskahorimaadka Falastiiniyiinta, kaas oo gacan ka gaystay dawlad daciif ah. Hogaamiyayaasha Falastiiniyiinta ayaa kala qaybiyay oo mararka qaarkood dib loo soo celiyo. Isagoo sii wadaya xaqiiqda maalmaha ugu dambeeya ee ololaha doorashooyinka, wuxuu ballan-qaaday in qaybo ka mid ah Baanka Galbeed ee la haystay haddii dib loo doorto, go'aan uu horay u diidey.
Waxa si ballaaran loo filayay wada xaajoodka isbahaysiga. Maraykanka, doorashooyinka ayaa muujiyay in reer binu Israa'iil ay kalsooni darro lumiyeen xal laba-dawladood ah, doorashana waxay u muuqdaan inay xaqiijinayaan arrintan.
Dad badan oo reer Falastiin ah, ayaa kala soocay Mr. Netanyahu iyo Mr Gantz inay ahaayeen kuwo aan ku xirneyn.
Saeb Erekat, oo ah madaxa wada-xaajoodka ee Falastiin, ayaa tilmaamay in natiijada ka soo baxday ay muujinayso in 18 xubno ka tirsan 120 ee Knesset ay weli kufarinayaan xal laba-gobol ah. isaga oo ugu yeeray "natiijo ka timid dhaqanka aan sharciga waafaqsanayn ee reer binu Israa'iil."
"Waxa ka soo baxa codbixinta ayaa muujinaya in reer binu Israa'iil ay u codeeyeen in ay sii wadaan xaalada taagan," ayuu yiri. "Waxay yiraahdeen" maya "nabadda iyo" haa "si ay u shaqeeyaan."
Falanqaynta hore ayaa shaaca ka qaaday ka qayb qaadashada taariikhda hoose ee muwaadiniinta Carabta ee reer binu Israa'iil, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah ay codkooda ka dhiibteen khilaafka siyaasadeed ee Israel.
Galab, hoggaamiyeyaasha Carabta ayaa Bluagrana ayaa isku dayaya in ay soo urura taageerayaashooda, masaajidda baahin wicitaanada ka sameecadaha minaarad iyo cusboonaaday qaybgalka daqiiqadii ugu dambeysay u muuqatay in ay di'i magaalooyinka qaarkood badan Carabta, inkastoo tani ma la tixgeliyey tiriyey bixitaanka.
Inkastoo Mr. Netanyahu iyo Gantz soo horjeeda oo kala horjeeda, natiijo aan la hubin ku siin karaan suurtagalnimada ay isku dayayaan in ay wada Abuuran dowlad wadajir ah haddii midkoodna maamula si ay u sameeyaan isbahaysi 61 Baarlamaanka Member Kuraasta 120.
"Su'aashu waxay tahay haddii dadku ay dhali doonaan dhirtooda iyo haddii kale," ayuu yiri Ibraahim Diskin, oo ah borofisar professor of science science at Ciraaq Universe. Yeruusaalem, iyada oo tixraacaysa baahida sharafeed iyo shuruudaha qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha xisbiyada ayaa hore ugu soo rogay inay qayb ka yihiin isbahaysiga.
Gantz iyo xulafadeeda ee isbahaysiga buluug iyo caddaan ka go'an in aan qayb ka mid ah dowladda kuwaas oo Ra'iisul waa sarkhaansan yihiin lacag ahaan, laakiin isbahaysi la Likud oo aan Netanyahu ayaa weli suurtagal ah.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta xagjirnimada ah ee Ortodoksiga ayaa diiday inay u ordaan dawladda. abaabulay Mr. Gantz.
Inta badan abid, natiijooyinka isku-dhafka ah ee doorashadu waxay ka tarjumaysaa Israa'il kala qaybsan.
Digniintu hadda waxay diiradda saari kartaa madaxweynaha Rivlin, oo la kulmi doona wakiilada dhammaan dhinacyada maalmaha soo socda iyo, iyada oo ku saleysan talooyinkooda, waxay go'aansataa in ay racfaan u siiso kuwa, aragtidiisa, inay leeyihiin fursada ugu fiican ee sameynta dawlad
"Markii ugu horreysey taariikhda Israel, doorka madaxweynuhu wuxuu noqon karaa mid aan calaamad lahayn oo laga yaabo in uu fuliyo xukunkiisa. Yohan Plesner, Madaxa Isbahaysiga Dimuqraadiga Israel, ku qoray Twitter .
Nasiib daro waxa uu ka cabsi qabaa Mr. Netanyahu, oo xiriirka la leh Rivrin ee ugu danbeeyay, oo ah halyeey reer Likud, ayaa muddo dheer ku jiray dad qoto dheer.
"Sharci ahaan, Rivlin waxay ku dari karaan hawsha tababarka dawladda ee qofkasta oo uu doonayo," ayuu yiri Professor Diskin, oo ah borofisar cilmiga siyaasadda. Sida doorashooyinka ugu badan ee isbahaysiga Israel, ayaa furay boosaska bulshada Israel. Laakiin Netanyahu lacag iyo dagaal uu u badbaado siyaasadeed ka dhanka ah Mr. Gantz, tartame ugu kalsoonaan karo ee tobanka sano ee, dad badan oo Israel ayaa sheegay in tartanka loogu yeelo Gomadahanaga hoostoodee iyo sida ugu badan ee ay u xusuustaan.
Seddex ka mid ah hogaamiyayaashii hore ee milatariga ee ku yaala Blue iyo White ayaa ah afar meelood oo ugu horreeya, Netanyahu wuxuu awoodi waayay in uu ku tiirsanaado siyaasadiisii ​​caadiga ahayd ee cabsida, taasoo muujinaysa inuu yahay musharax keliya oo awood u leh inuu ilaaliyo Israel.
Taa bedelkeeda, Ololahiisa wuxuu diiradda saarayaa cadaadiska laga qabo gudaha gudaha.  million. Netanyahu waxay ku nuuxnuuxsadeen ololaha xasilinta Carabta ayaa digniin u jeediyay Israa'iil in Mr. Gantz uu "siin doono qayb ka mid ah waddanka Carabta". Waxa kale oo uu la xidhiidhaa koox cunsuriyad ah Mid ka mid ah xubnaha Maxkamadda Sare ayaa ugu dambayntii Maxkamadda Sare ka mamnuucday doorashada.
Mr. Netanyahu's Likud ayaa qirtay in uu u diray dad badan oo 1 000 ku rakibay kamarado si ay u doortaan xarumaha codbixinta ee magaalooyinka Carabta si ay u qabtaan caddayn ku saabsan wax khasaare ah, laakiin madaxda Carabtu waxay ku qeexeen isku daygan in ay cabsi-galinayaan cod-bixiyayaasha.
Isagoo ka hadlaaya sida uu uga xun yahay, wuxuu ku eedeeyay Blue iyo White inuu xaq u leeyahay, isaga oo ku andacoonaya in uu isku dayay inuu ku biiro dowladda Netanyahu.
Mr. Netanyahu wuxuu isku dayay inuu ka dhigo mid ka soo horjeeda hoggaamiye caalami ah oo khibrad leh iyo hannaan siyaasadeed oo aan horay loo arag. Dhinaciisa waxa uu weydiiyay su'aalo ku saabsan [SexualitybyMGantz waxa uu u nugul yahay in ay afduubaan dadka reer Iran ka dib markii uu taleefanka gacanta ku xadgudbay, iyo xataa isaga degenaansho maskaxeed .
Xisbiga Mr. Gantz ayaa sheegay in ay doonayaan in ay Israa'iil dib ugu soo celiyaan. Wuxuu la dagaallamay Mr. Netanyahu ee carqaladeynaya isagoo ballan-qaaday inuu soo celiyo dareen ah midnimo, qadarin iyo qiyam dimuqraadi ah
. Dhacdooyinka xisbiyada yaryar ee labada dhinacba waxay ahaayeen kuwo aan caddayn karin oo ay weli noqon karaan kuwo xalin kara. Ka bixista codbixinta ayaa sidoo kale isku dhafan, iyada oo qof kasta sugaya natiijooyinka rasmiga ah.
"Habeenku wakhti dheer ayuu ahaa," ayuu Netanyahu ka yiri dibad-baxkiisii ​​ka dib saqda dhexe. "Waxa ay noqon doontaa maalin dheer oo sugeysa natiijooyinka dhabta ah."
Adriable: Enrique Iglesias ayaa qalbiga ku dhejiyay fiidiyoow daqiiqad gaar ah iyada oo mataano ah